Fiberglass Sunscreen Fabric Vagadziri & Vatengesi - China Fiberglass Sunscreen Fabric Fekitori
Makore mashanu Warranty Sunscreen Roller Rudzi rweGirazi Fibre Mucheka
Nekuvakwa kwemazuva ano kwekusungirirwa pamumvuri, kuwedzera kwekuda kwezvigadzirwa zvemumvuri kwakonzera zvakare kumutsiridzwa kwemicheka inopofumadza. Mazuva ano machira emicheka anosanganisa ruvara, kujeka, kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza uye kushongedza, uye anotambirwa nemhando dzese dzehupenyu. Ivo vanotibvumidzawo kuti tiswedere padhuze nemasikirwo uye titeerere kune hupenyu. Izvo zvemachira eapofu anonyanya kusanganisira girazi fiber polymer inosanganisa zvinhu uye polyester fiber polymer inosanganiswa zvinhu.
Girazi reGraceve girazi fiber ine yakanakisa kujeka kugadzikana, kushanduka kwekushanduka mushure mekushanduka kwetembiricha uye kushushikana kudiki, uye simba rekusimba rakasimba, chiyero chemoto chakakwirira, uye hupenyu hwebasa hwakareba.
China Eco-inoshamwaridzika Fiberglass Sunscreen Mucheka 5% Kuvhura
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Pane kuvhurika kwakasiyana kuti iwe usarudze, senge1%, 3%, 5%, 10%. Pakati pavo, 10% yekuvhura machira anogona kuwana yakanaka yechisikigo mwenje uye kujekesa, asi iko kuita kunopesana nezuva reza radiation uye kupenya kwakanyanya. Isu tinowanzokurudzira kushandisa machira ne10% yekuvhura ratio mune mamwe maratidziro ezuva (senge kuchamhembe). Iyo zvakare inoshandiswa mune mamwe mavara girazi keteni madziro kuti uwane akanakisa echisikirwo mwenje uye pachena.
Mukupfupisa, kune marudzi mazhinji e fiberglass machira ezuva ezuva nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye ruvara, sarudzo yemicheka yegirazi yegirazi yegirazi inofanirwa kufunga nezve nzira mbiri, kureva kunaka kwejira pachako uye nharaunda yekushandisa. Tinogona kupa yakanakisa kurudziro kune vatengi vedu.
Eco-inoshamwaridzika inorwisa mabhakitiriya Kunze Fiberglass Solar Screen Fabric
Girazi faibha inorganic isiri-yesimbi zvinhu zvine kugona kuita uye chikamu chakakosha chemicheka yegirazi yegirazi yegirazi. Izvo zvinosanganisa ndeye silika, alumina, calcium oxide, boron oxide, magnesium oxide, sodium oxide nezvimwe zvakadaro. Iyo fiberglass rezuva screen screen jira rakagadzirwa nemasikirwo emaminerari (quartz, jecha, soda, lime). Usati waruka, yega yega girazi fiber yakaputirwa nePVC, yakarukwa neshinda imwe, uye pakupedzisira kupisa-kuseta uye kusimbiswa. Iyi fomu mune yenguva dzose yakarukwa machira.
Iko kuumbwa kwe fiberglass rezuva screen machira ndeye 35% fiberglass uye 65% PVC kana 30% fiberglass uye 70% PVC maererano nekuvhurika kwakasiyana.
Eco-inoshamwaridzika fiberglass Sunscreen Mucheka 36% Fiberglass Uye 64% PVC
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Iyo yemahara yesimbi inorema uye zvinhu zvinokuvadza, yakachengeteka uye eco-inoshamwaridzika, hapana kunhuwa kunoshamisa, hakuna kukuvadza kumuviri wemunhu, kugadzikana kwakanyanya, kwakanaka uye kwakanaka, uye kuenderana kwemavara kwakakodzerawo kushongedzwa kwazvino.
Kune akawanda marudzi e fiberglass jira rezuva rejira nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye neruvara, saka nzira yekusarudza fiberglass rezuva rejira rezuva rinonyanya kukosha. Tinogona kupa mahara emahara kune vatengi vedu kuitira kuti iwe ugone kusarudza machira uye kutarisa mhando zvakananga. Zvakare, jira redu rese rave bvunzo isati yatumirwa kuve nechokwadi chehunhu.
Fekitori Mutengo Roller Blinds Fiberglass Sunscreen Mucheka
Iyo fiberglass yemucheka wezuva jira rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo inogona kunyatsovhara zuva uye ultraviolet mwaranzi, iyo inobatsira kune hutano; Sefa glare mwenje, tora mwenje wechiedza, gadziridza yemukati mwenje mhando, gadzirisa inoona munda nyaradzo; kuderedza kurasikirwa kweraini mitsara nemvura, uye anogona kuona kunze zvakajeka pasina kuparadza iyo yakajeka yekuona maitiro. Pane kuvhurika kwakasiyana kuti iwe usarudze, senge1%, 3%, 5%, 10%. Ndicho chinhu chikuru chinogadzirisa iro shading basa rejira.
Mukupfupisa, kune akawanda marudzi e fiberglass machira ezuva ezuva nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye ruvara.
Mufashoni Fiberglass Sunscreen Mucheka 38% Fiberglass Uye 62% PVC
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Pane kuvhurika kwakasiyana kuti iwe usarudze, senge1%, 3%, 5%, 10%. Ndicho chinhu chikuru chinogadzirisa iro shading basa rejira. Tinogona kusarudza machira akavhurika akasiyana zvinoenderana nezvinodiwa nenharaunda iriko chivakwa. 5% inowanzo shandiswa zvakanyanya, inovhara mwaranzi yezuva. Kudzora kupenya uye kuwana mwenje wechiedza uye kujekesa kwakanaka, isu tinowanzo kurudzira kumaodzanyemba.
Mukupfupisa, kune marudzi mazhinji e fiberglass machira ezuva ezuva nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye ruvara, sarudzo yemicheka yegirazi yegirazi yegirazi inofanirwa kutarisa nzira mbiri, kureva mhando yejira pachako uye nharaunda yekushandisa. Tinogona kupa yakanakisa kurudziro kune vatengi vedu.
Flame Retardant Washington City Offices Sunscreen Mucheka WeHofisi
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Iyo haingogone chete kubvisa inosvika makumi masere muzana emagetsi ezuva, asi zvakare chengetedza mukati memhepo kutenderera, uye inogona kuona zvakajeka nzvimbo yekunze. Iine murazvo unodzora zvinhu zvisingawanikwe mune mamwe machira. Iyo chaiyo fiberglass sunscreen machira haizove akaremara kana kaboni nekuti iro remukati mafupa emucheka igirazi fiber mushure mekutsva. Kune machira akajairwa, iwo mafupa ese anopiswa uye akaiswa carbonized mushure memoto.
Kune akawanda marudzi e fiberglass jira rezuva rejira nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye neruvara, saka nzira yekusarudza fiberglass rezuva rejira rezuva rinonyanya kukosha.
Kugwinya Kwakanaka Kunze Kunopofomadza Fiberglass Sunscreen Fabric 2.5m Upamhi
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Iyo yakasarudzika zvicherwa uye haipe hutachiona hwekukura nharaunda. Hutachiona haugone kubereka uye jira harizove rakaumbwa. Iyo haina adsorb solid solid mumhepo uye haina kuomerera kuguruva futi, iyo inogona kunyatso deredza huwandu hwehuruva. Zvakare, hapana chikonzero chekusimbisa, kusatsemuka kwemisodzi, ine yakakosha mhepo kuramba uye mechikari zvimiro zvinomiririra kushandiswa kazhinji.
Kumba Kushongedza Fiberglass Sunscreen Mucheka 38% Fiberglass Uye 62% PVC
Iyo fiberglass yemucheka wezuva jira rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Iyo inogona kunyatsovhara zuva uye ultraviolet mwaranzi, iyo inobatsira kune hutano; Sefa glare mwenje, tora mwenje wechiedza, gadziridza yemukati mwenje mhando, gadzirisa inoona munda nyaradzo; kuderedza kurasikirwa kweraini mitsara nemvura, uye anogona kuona kunze zvakajeka pasina kuparadza iyo yakajeka yekuona maitiro. Pane kuvhurika kwakasiyana kuti iwe usarudze, senge1%, 3%, 5%, 10%. Ndicho chinhu chikuru chinogadzirisa iro shading basa rejira. Tinogona kupa yakanakisa kurudziro kune vatengi vedu.
Inokodzera kumahotera, dzimba dzekugara, dzimba dzekugara dzakakwirira, nzvimbo dzekutandarira, nezvimwewo Iyo yakareba Groupeve fiberglass sunscreen machira ndeye 30m pamupumburu. Imwe yega roll yakaputirwa mune yakasimba pepa chubhu.
Yakakurumbira Fiberglass Sunscreen Mucheka 5% Kuvhura
Iyo jira reGroupeve fiberglass yezuva yezuva rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Pane kuvhurika kwakasiyana kuti iwe usarudze, senge1%, 3%, 5%, 10%. Pakati pavo, 1% kusvika 3% kuvhurika kwejira kunogona kuvharira kupisa kunogadzirwa nemwaranzi yezuva kusvika padanho rakakura uye kudzora kupenya, asi mwenje wechisikigo unopinda zvishoma uye iko kujekesa kushanda kuri kushoma. Naizvozvo, isu tinowanzo kurumbidza mune mamwe maratidziro ezuva-ekuvhenekesa (senge kumadokero) uye kana madziro emaketeni ari girazi rinoonekera. Kugadzirisa dambudziko remhepo ine simba kupisa uye kupenya kwezuva.
Mukupfupisa, kune marudzi mazhinji e fiberglass machira ezuva ezuva nekuda kwesangano rakasiyana, kuvhurika uye ruvara, sarudzo yemicheka yegirazi yegirazi yegirazi inofanirwa kutarisa mativi maviri, kureva kunaka kwejira pacharo uye nharaunda yekushandisa. Tinogona kupa yakanakisa kurudziro kune vatengi vedu.
Kunze Kunopofumadza Uye Awnings Vharanda Washington City Offices Solar Screen Mucheka
Iyo fiberglass rezuva screen screen jira rakarukwa neepamusoro-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neyakaitwa maitiro. Izvo zvakanakira fiberglass machira ezuva anodzivirirwa anogona kungopetwa se: mumvuri wezuva, kuputira uye kujekesa.
1. Bvisa kupisa kunogadzirwa nemwaranzi yezuva, zvinobudirira kudzora mutoresi wemhepo;
2. Sefa kupenya, tora mwenje wechiedza, gadziridza yemukati mhando uye yekuona nyaradzo;
3.Tora kuve pachena kwakanyanya, izvo zvisingakwanise kungonakidzwa nenzvimbo dzakajeka dzekunze nekunze asiwo kudzivirira vekunze kuti vatarise;
4. Zvinobudirira vhara yakasimba ultraviolet mwaranzi kubva kupinda mumba, izvo zvinobatsira kune hutano.
Transparent Fiberglass Sunscreen Mucheka 5% Kuvhura
Iyo fiberglass yemucheka wezuva jira rakarukwa neyakareba-simba girazi fiber yakavharwa PVC kuburikidza neakasarudzika maitiro. Izvo zvakanakira fiberglass machira ezuva anodzivirirwa anogona kungopetwa se: mumvuri wezuva, kuputira uye kujekesa.
1.Kudzivirira uye kupisa kupisa
2. Kunyange uchinyatso shading, tora yakanaka yekuona munda pasina kukanganisa iko kwemukati kupenya.